QALABKA JILICSAN: MABDA'A HAWLGALKA, XEERARKA ISTICMAALKA, TAXADDARRADA, IYO WELIBA QIIMAHA CELCELISKA - GURI, GURI
"Badbaadinta"! Xadhkaha jilicsan: mabda'a hawlgalka, xeerarka codsiga, iyo sidoo kale qiimaha celceliska
Bilawga maalmaha diiran ee milkiilayaasha xayawaanka ah ma aha oo kaliya farxadda wadooyinka wadaagga ah, laakiin sidoo kale dhibaatada boodada, shilinta.
Naaso yaryar ayaa matalaya halis caafimaad iyo nolol shakhsi shaggy, maadaama ay yihiin sidayaal cudurada faafa.
Waa hab macquul ah oo ka dhan ah dhiig bixiyaha khatarta ah waa qoryo gaar ah.
Wajiga dhiigbaxa waa cajalad saafi ah oo leh balaasti. Midabaynta iyo xajmiga waxaa loo dooran karaa shakhsi ahaan. Qaar ka mid ah moodooyinka ayaa leh xariijin muuqaal ah. Iyadoo ku xiran mabda'a ficilka, waxay u kala qaybsan yihiin noocyada:
Ultrasound - ku rid batariyada, ku celi kabaha adigoo ultrasound.
Kiimikada - ku saabsan walxaha halista u ah dhiig bixiyaha.
Biological - on saliidaha lagama maarmaanka ah, geedo yaryar.
Hababka bayoolojiga ah haysato ur adag, sidaa daraadeed, ma aha in xayawaanka oo dhan ay adkeeyaan. Calaamadaha xanuunka xasaasiyaddu waxay u muuqdaan muuqaal guduudasho ah maqaarka.
WARBIXIN! Qaybaha Antiparasitic ee wakiillada curyaanka iyo eeyda waxay isku mid yihiin qaabka iyo muuqaalka.
Diyaarso iyo qalabka kiimikada waxaa ku jira sunta suntan cayayaanka. Urka badeecadda waa mid aan fiicnayn oo keeni karta diidmo. Naxdintu waxay joogi doontaa ilaa inta ay cayayaanka ku jirto. Iyadoo la waayayo, qalabku wuxuu u noqon doonaa qalab joogto ah.
Waxtarkiisu wuxuu ku xiran yahay halbeegga kiimikada, iibiyaashu waxay daabacaan baakadka - diazinon (dimpilat), S-methoprene, fipronil. Qaybta walaxda firfircooni waa in aysan ka badnayn 15%, haddii kale oofiyeyaashu ma dhibayaan. Waa suurtagal in la seexdo xayawaan leh oo leh qoorta oo qoortiisa ku xiran.
DAREEN! Moodooyinka Ultrasonic waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwa ugu badbaado badan, ma soo saari karaan sunta iyo ha urin. Laakiin isla markaa, waxtarka noocaas oo kale ah ayaa ka hooseeya noocyada kale, kharashkuna waa ka sarreeyaa.
Mabda'a hawlgalku waa mid fudud - sida ugu dhaqsiyaha badan oo ah qoorta xayawaanka, wakiilada caydha (iyada oo ku xidhan noocyada) waxay ku faaftaa dhammaan jaakadda. Kabaha, dareemidda khatarta, waxaa lagu badbaadiyaa duulimaad ballaaran.. Haddii ay jiraan dhiig bixiye badan, habkaan ayaa la ogaanayaa. Qalliinka dhan ee antiparasitic wuxuu qaadan doonaa dhowr saacadood illaa dhowr maalmood, iyadoo ku xiran tirada cayayaanka degan.
Faa'iidada iyo iskudhafka dabka
Qoryaha difaaca ayaa muddo dheer degay niche ee suuqa xannaanada xoolaha. Ma aysan lumin kuwa ugu caansan sanado badan. Faa'iidooyinka aan la isku haleyn karin ee isticmaalkooda waa:
Waxaa sidoo kale jira kuwa ka soo horjeeda qalabka, kuwaas oo soo xiganaya doodaha soo socda ee ay ku faanayaan:
saameyn dhab ah waxaa la arkay 2-3 bilood, inkasta oo shirkadaha wax iibsanaya lix bilood;
dhammaan cajaladaha oo dhan waa qoyaan u adkaysta, Sidaa darteed, maaha kuwo ku habboon eeyaha ku lug leh ugaadhsiga;
ur adagkaas oo soo gala guriga oo dhan;
Qaybaha kiimikada waa xasaasiyad xoog leh.
WARBIXIN! Xayawaanka ku jira qulqulatadu si dhab ah uma dhibaateeyn karaan alwaaxa gogosha, oo jiifa, oo ka soo horjeeda aerosolska antiparasitic, dhibic.
Waxbarashada wakiilka ilaalinta waa mid fudud:
Qaado qalabka xirmada..
Dib uga noqo baaldiga.
Ku duub cajalad ku wareegsan qoorta xayawaanka.
Daboolka cajaladda si aad ugu habboonaato, laakiin aanad galin.
Si alaabadu u shaqeyso, marin-u-helku waa inuu had iyo jeer ku jiraa xayawaanka. Marka aad maydhanayso, qoryaha ayaa laga saari karaa, laakiin waxay u baahan doontaa in lagu duuduubiyo bac si markaa walxaha firfircooni ma aha "daal." Ka qaad cajalada waxaa lagu talinayaa keliya kiisaska naadirka ah iyo kuwa gaarka ah.
MUHIIM! Mudada celceliska muddada ilaalinta ilaalinta waa 2 bilood. Xirfadaha American iyo German waa kuwo waxtar leh mudo 7 bilood ah.
Isticmaalka qafisku waxay ku lug leedahay ilaalinta taxaddarrada
Haddii cajaladuhu uu ahaa mid aan fiicneyn oo xayawaankuna wuxuu lahaa calaamado aan fiicneyn, isbeddel calaamad. Laga yaabee tusaaluhu uusan ku habboonayn xayawaankaaga.
Kana qaado uun alaabooyinka lagu baaray saaxiibbada.. Looma baahna markaad doorato inaad diirada saarto kharashka yar.
Waad iskugu duubi kartaa cajaladda leh walxo kale oo antiparasitik ah., waa wax khasaare leh timo lumis, dermatitis, xasaasiyadaha xayawaanka.
Xaqiiji in xayawaanku uusan calalinaynin caaradawaayo, isagu waa kaamil ma aha. Xaaladdan oo kale, waxsoosaarayaasha firfircooni waxay muujinayaan walxaha lidka-ka-qabadka ee tilmaamaha.
Daboolka ka soo dulsaaraya waxaa loo gudbiyaa habab raqiis ah, laakiin maaha sidaas. Nooca dib u soo dejinta tayada badan ayaa kharash badan. Laakiin haddii aad xisaabta ku darto kharashka buufinta iyo hoos u dhaca, faa'iidada ayaa ah mid cad.
Qiimuhu waa kala duwan yahay. laga bilaabo 50 roon ilaa 3 kun rubles. Qiimaha ayaa ku xiran nooca alaabta iyo soo saaraha. Qiimaha ugu raqiisan - waxtarka "BioFloR" (55 p). BAYER calaamadeysan ayaa ku kici doona 2,600 roon.
DAREEN! Waa inaadan ka iibsan hababka qiimaha jaban ee suuq-geynta ah. Saameynta maadooyinkooda si buuxda looma fahmin, ka taxadarka caafimaad ee xayawaankaaga.
Shirkadda Holland Beaphar waxay soo saartaa alaabooyin kala duwan oo loogu talogalay nolosha caafimaadka leh ee xayawaanka shaggyada ah, oo ay ku jiraan khadka daawada antiparasitic.
Waxyaabaha ey eey ku jiraan diazinon (3.6 g / badeecada). DLina bareenta biyaha adag 65 cm, culays 24 g. Badeecadu waxay leedahay cillad asal ah. Nuqul kasta waxaa lagu shaabadeeyaa boorso, waxaa jira sanduuq calaamadeysan.
Qaabka ugu caansan eeyaha - Beaphar Ungezieferband. Kalluumeysiga dagaalka iyo shilinta muddo 5 bilood ah. Cajuuska ayaa ku habboon dhalashada (laga bilaabo lix bilood), lakiin waxa uu ka hortagaa xannaaneynta iyo xayawaanka jirran. Waxtarka ugu sarreeya ayaa horeba u muuqda ka dib 5 maalmood oo xidhan.
Wixii bisadaha, milkiilayaasha ayaa si sii kordhaya u dooranaya Beaphar. Halbeegga cajaladda ah waxaa ka mid ah cayayaanka dabiiciga ah - saarista neem. Sidaa darteed cajalad gabi ahaanba amaan ah xataa xitaa ilmo. Ekolenta ma ahan mid ka gaabis ah waxtarkeeda waxtarka qaaliga ah.
Waxyaabaha ay ka dhisteen 80 dal. Waxaad ka iibsan kartaa alaabada internetka qiimo jaban. Qiimaha caadiga ah eeyaha - 185 roon, bisadaha - 160 rubir.
Haddii aad go'aansato in aad ka ilaaliso xayawaankaaga ka shaqeeya dhiqlaha adiga oo adeegsanaya qoryaha, si aad u taxadar leh u dooro, adigu adigana aad ku baratay habka iyo tilmaamaha. U dooro soo-saarayaasha la caddeeyey. Badbaadada arrintani waxay halis u tahay nolosha xayawaanka.